India: Mpanao gazety mpitoraka bilaogy nanelanelana hanavotana polisy takalon’aina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2009 20:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, বাংলা, English
Tao amin'ny fanjakan'i Bengal andrefana dia nisy ady nifanandrinan'ny mpioko maoista(Naxalites) sy ny miaramilam-pirenena. Noraran'ny fitondrana tamin'ny volana jona lasa teo ny Antoko Komonista Indiana (Maoista), antoko miafina sady tsy manana solontena ao amin'ny antenimiera, noho ny lalàna mandrara ny hetsika tsy manara-dalàna ka nanondroany io antoko io ho fikambanana mpampihorohoro.
Aradhana Jhunjhunwala ao amin'ny OpenIndia no manazava ny fototry ny fifandonana.
Ny 20 oktobra lasa teo dia maoista 12 no nanafika ny biraon'ny polisy tao Sankrail any Midnapore Andrefana ka lasany tamin'izany ny basy 10 sy bala maro tao amin'ny trano fitehirizana. Polisy 2 no maty ary inspektera iray antsoina hoe Atindranath Dutta no nalaina an-keriny.
India under attack and other musings!! (Inda ao anatin'ny fanafihana sy ny nofy hafa koa) no namariparitra ny toe-draharaha izay nahombiazan'ny mpanafika:
Polisy 13, mpiambina 5, mpilatsaka an-tsitrapo 3 ary inspektera lefitra 3 no tao amin'ity paositry ny polisy ity raha nanafika tao ny maoista. Tsy nisy nitondra fiadiana ireto polisy na dia iray aza. Ny antony, ny fanao aty dia hidiana any amin'ny kôfra ny fitaovam-piadiana [..]
Nahoana? Milaza ireto polisy fa ny antony iray dia mifanentana amin'izay ampiasain'ny Naxals ny fitaovam-piadiany – noho izany naleo nohidiana izy ireny ho “azo antoka”
Nalain'ireo maoista ho takalon'aina ny polisy manam-boninahitra iray ary ho takalony dia takian'izy ireo ny hamotsorana ireo vehivavy 14 avy ao amin'ny fokony nosamborina satria noahiahiana ho mpikambana ao amin'ny antoko miafina maoista.
Sans Serif no nitatitra fa omaly dia mpanao gazetin'ny BBC roa mpitoraka bilaogy ao amin'ny Subir Bhowmik “no nanampy tamin'ny famahana ny olana teo amin'ny fanjakana sy ireo maoista, mandrapaha-afak'i Atoa Dutta. Ny tohiny dia ny famoahan'ny fitsarana didy manafaka ireo vehivavy 14 tany am-ponja tamin'ny alalan'ny fandoavana caution.
Araka ny voalazan'ny mpanao gazety iray ao amin'ny Times of India, dia “nanelanelana sy nampifandray ny mpioko sy ny fanjakana” ireto mpanao gazetin'ny BBC ireto satria ny lehiben'ny maoista, Koteshwara Rao antsoina hoe koa Kishenji, dia nanda tsy nety niresaka mivantana tamin'ireo solon-tenam-panjakana.
Mampitaha ity zava-nisy ity amin'ny efa niseho taloha ny mpitoraka bilaogy, zava-nisy izay nahitana mpanao gazety mandray andraikitra mamaha olana.
Dr. Ujjal K. Pal no mampahatsiahy antsika:
Tsara fiafarana iny fakana an-keriny iny.
Na izany aza dia tsy mitsahatra akory ny raho-mitatao satria polisy 2 hafa, Kanchan Garai sySabir Ali avy ao amin'ny tobin'ny Bengale andrefana ihany, no nisy naka an-keriny 3 volana lasa izay ary tsy mba nanam-bitana tahaka an'i Mr Dutty. Tsy misy mahalala izay misy azy ireo ankehitriny ary tsy misy mahafantatra na mbola velona izy ireo na efa maty. Angamba tsy mieritreritra ny hitady azy ireo intsony ny fanjakana.
Nirmalya Nag avy any Kolkata no nanasongadina ny fototry ny olana:
Misaotra ny fanjakana mamela ny polisy hisambotra anjambany izay noheverina ho maoista izy ary mamela ireto polisy koa hitsikaraka samy irery izay ho fiarovan-tenany, misaotra ny mpanohitra tsy nanameloka ny vono olona nataon'ny maoista, misaotra ny mpiaro ny zon'olombelona izay manameloka ny fanafoanana ny maoista kanefa mangina rehefa mamono olona izy ireo.
Ankehitriny dia andrasantsika indray ny fakana an-keriny manaraka.
10 Oktobra 2021Azia Atsimo
07 Oktobra 2021Azia Atsimo
28 Septambra 2021Azia Atsimo